स्वास्थ्य/जीवनशैली Archives - Page 47 of 85 - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
गर्भ रहेन ? यसाे गर्नुहाेस
काठमाडाै, ३० पुस । बिवाहपछि सन्तानको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । जब बिहे गरिन्छ, सन्तानको लोभ लाग्न थाल्छ । अक्सर महिला आफ्नो काखमा बच्चा खेलाउन लालयित हुन्छन् । यसका लागि कतिले निश्चित अवधी तय गर्छन् । अर्थात आफुलाई व्यवस्थित गरिसकेपछि...
योग पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न माग
काठमाडौँ, ३० पुस । प्राचीनकालमा योग, ध्यान र आयुर्वेदका माध्यमबाट मानसिक शान्ति एवम् स्थिरता र आरोग्यताको प्राप्ति हुने गरेकामा यसबाट टाढा भएकाले अनेक समस्या बढ्न थालेपछि पछिल्लो समय मानिस फेरि योगतिर आकर्षित हुन थालेका छन् । आधुनिक युगको प्रभावमा योगलाई...
के कारण यौनसम्पर्कै गर्न मन लाग्दैन ?
म २२ वर्षीया विवाहित महिला हुँ । मलाई कहिल्यै यौनसम्पर्क गर्न मन लाग्दैन । त्यसले गर्दा श्रीमानसँग झगडासमेत भैरहन्छ । यो कुनै रोग त होइन ? यो समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्ला ? मानव यौनेच्छा यौन चाहना मानव जीवनको अभिन्न...
यौन सन्तुष्टि भयन भने हर्नुहोस कुन रोग लाग्छ ?
म २६ वर्षकी विवाहिता हुँ । हाम्रो ४ वर्षको छोरा छ । हामी दुवैलाई यौन चाहना हुनु स्वाभाविकै हो । जब छोरो निदाउँछ तब हाम्रो यौन क्रियाकलाप सुरु हुन्छ । तर, श्रीमान छिट्टै उत्तेजनामा आउनुहुन्छ र यौन चाहना मेटाउन खोज्नुहुन्छ...
करोडौंका उपकरण अञ्चल अस्पतालमा थन्किए, बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनु पर्ने बाध्यता
राजविराज- विशेषज्ञ डाक्टरको अभावमा सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा करोडौं मुल्यका अत्याधुनिक उपकरण वेकम्मा भएर थन्किएका छन्। अस्पतालको सेवा विस्तारका लागि उपलब्ध गराईएका उपकरण त्यसै थन्किएपछि सर्वसाधारणको उपचार सेवा प्रभावित भएको छ । तर, सरकोरवाला निकायको ध्यान पुगेको छैन।...
« 1 … 46 47 48 … 85 »